भारतमा भिडदैछन् संसारका दुई धनाढ्य जेफ बेजोस र मुकेश अम्बानी, यस्तो छ कारण| Corporate Nepal
कात्तिक १४, २०७७ शुक्रबार १२:४३
काठमाडौं । संसारका सबै भन्दा धनी व्यक्ति र भारतका सबै भन्दा धनी व्यक्ति यतिबेला आमने सामने भएका छन् र त्यसको बीचमा छ भारतको रिटेल किङ किशोर बियानी र उनको बिज बजार । बिग बजार बीचमा छ किन की यो उनको सबै भन्दा प्रख्यात ब्राण्ड हो र यसको सम्झौता ठुलो छ, त्यसका लागि लगाइएको दाउ अझै ठूलो छ । संसारका सबै भन्दा धनी व्यक्ति हुन अमेजनका जेफ बेजोस । यतिबेला उनको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ रिलायन्सका मुकेश अम्बानीसँग जो भारतका सबै भन्दा धनी र विश्वका चौथो धनी व्यक्ति हुन् ।
यी दुईबीच प्रतिष्पर्धाको कारण हो किशोर बियानी र उनको फ्युचर ग्रुप । गत आइतबार अमेजनले सिंगापुरको अन्तराष्ट्रिय पञ्चाट सिंगापु इन्टरनेशनल आर्बिट्रेशन सेन्टरबाट एक अन्तरिम आदेश जारी गरायो किन फ्युचर ग्रुपको कारोबार रिलायन्सलाई बेच्न सक्दैन् । त्यस्तो किन र कसरी भन्ने तथ्य जान्नु अघि यो सम्झौता के हो भन्ने बुझौं ।
बियानीको फ्युचर ग्रुप आफ्नो सबै रिटेल तथा होलसेल कारोबार रिलायन्स समुहको रिलायन्स रिटेल भेञ्चर्स लिमिटेडलाई बेच्ने करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अगष्टमा दुबै कम्पनीले घोषणा गरेका थिए की रिलायन्सले २४७०० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेछ ।
संसारका सबै ठूला रिटेलरको आँखा फ्युचर ग्रुपमा
त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो की आखिर किशोर बियानी किन यस्तो सम्झौता गरिरहेका छन् ? जसमा उनको सबै भन्दा ठूलो ठुलो बिग बजार मात्रै होइन पुरा रिटेल तथा होलसेल कारोबार बेचिनेछ । तथापी कम्पनीको वा प्रवद्र्धकको पुरा ऋण तिर्न असम्भव हुनेछ । यो कुरा पनि बुझ्न मुस्किल थिएन की पछिल्लो समय कम्पनीले नयाँ कारोबार खडा गर्न मोटो रकम खर्च पनि गरेको थियो र त्यसका लागि प्रवद्र्धक बियानी परिवारले पनि आफ्नो सेयर धरौटी पनि राखेको थियो । उनीहरुलाई विश्वास थियाो की चाँडै बजार सुध्रनेछ र कमाई बढेर ऋण तिरि सेयर छुटाउन सकिनेछ ।
किशोर बियानी केहि समयदेखि संसारको कुनै ठूलो रिटेलरसँग हात मिलाउने प्रयासमा थिए । वालमार्टसँग पनि उनले लामो समय कुरा गरे । फ्रान्सका कारफुअरसँगको सम्झौताबारे त १० वर्ष पहिले नै चर्चा थियो । छोटकरीमा भन्ने हो भने संसारका सबै ठूला रिटेलर्सको आँखा फ्युचर ग्रुपमा थियो, किन त्यतिञ्जेल यो देशको सबै भन्दा ठूलो रिटेलर कम्पनी थियो । फ्युचर ग्रुपको व्यवस्थापनले पनि बुझेको थियो की टाटा बिर्ला, रिलायन्स जस्ता कम्पनीसँगका प्रतिष्पर्धा गर्न उसलाई अर्काे ठूलो कम्पनीको साथ चाहिन्छ ।
बाधा केबल एउटै थियो की भारतको विदेशी लगानी नीति । खासगरि रिटेल व्यापारमा विदेशी लगानीका विषयमा सचेतता पूर्वक कदम चलाउँछन् । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता तबसम्म कुनै पनि भारतीय कम्पनीमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछ जबसम्म कम्पनीमा उसको नियन्त्रण दबाव बढाउन लायक हिस्सेदारी हुन्न । खुद्रा कारोबारको नियमले ठूलो मुस्किल खडा गरिदिएको छ । जबकी कुनै सर्त अब सिंगल रिटेल ब्राण्डमा शतप्रतिशत र मल्टि ब्राण्ड रिटेलमा ५१ प्रतिशतसम्म सेयर विदेशी कम्पनीले लिन सक्छन् । तर यो त्यति सहज भने छैन् । सबै कम्पनी यो शर्तसँग सहमत छैनन् । दोश्रो ठूलो बाधा भनेको अनलाइन रिटेलर अर्थात ईकमर्श कम्पनीका लागि बिलकुल अलग्गै नियम छ । यो छुट पाएपछि पनि कुनै ईकमर्श कम्पनी भारतमा कुनै रिटेल कम्पनीमा १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर लिन सक्दैन् । र दुबै कम्पनीको अनलाइन कारोबार तथा अफ लाइन कारोबारका पसल, स्टोरहरुका बीचमा कुनै सम्बन्ध हुनु हुन्न ।
यो नियम अचम्मको छ की एकातर्फ अमेजन आफैं भारतमा जमेर कारोबार गरिरहेको छ । अर्काे तर्फ भारतबाटै सुरु भएको फ्लिपकार्ट अब वालमार्टको हातमा पुगिसकेको छ । तर अमेजनका लागि फ्युचर ग्रुप या त्यस्तै अर्काे रिटेलरको सेयर खरिद गर्न मुस्किल भैरहेको छ ।
कोरोना महामारीबाट भयो समस्या
कोराना कालमा फ्युचर ग्रुपले आवश्यक पैसा ऋण लिएर व्यवस्थापन गरेको थियो । ठिक यहि समयमा रिलायन्सको रिटेल बजारमा दबदबा बढिरहेको थियो । उता आइपीओपछि डिमार्टले पनि नयाँ जोशका साथ कारोबार बढिरहेको थियो । देशको अवस्था सुध्रने आँकलन भैरहेको थियो, ऋण लिएर कारोबार बढाउनुमा कुनै जोखिम देखिएको थिएन् । ऋणको आवश्यकता पुरा गर्न प्रवद्र्धकले आफ्नो थुप्रै सेयर धरौटी राखेका थिए । उतिबेला फ्युचर ग्रुपको सेयर ३८० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको थियो ।
यसपाली फेब्रअरीमा अचानक सेयरको मूल्य घटेर एक सय रुपैयाँ भन्दा तल आइपुग्यो । मूल्य घटेपछि ऋण दिने बैंकले मार्जिन कल गरेर अरु सेयर माग गर्छन् । अवस्था यस्तो बन्यो कि केहि समयमै प्रमोटरको अधिकांश सेयर बैंकमा धरौटी भयो । यस्तो अवस्था आउनुमा केहि सेयर बजारका खेलाडीहरुको हात रहेको अनुमान लगाउनेहरु पनि छन् । यो अवस्थामा पनि सुधार आउने संकेत देखिएका थिए तर कोरोना महामारीले लकडाउन सुरु भयो । त्यसले गोदाममा समान थुप्रियो र बिक्रि हुनै छाड्यो ।
किशोर बियानीले नै एक अन्तरवार्तामा भनेका थिए की लकडाउनले सबै स्टोर बन्द गरिए, तीन चार महिनामा सात हजार करोड नोक्सानी भयो, जसका कारण कम्पनी बेच्ने निर्णयमा पुग्नु मात्रै विकल्प बाँकी रह्यो ।
अब प्रश्न उठ्छ की अमेजनले यो झगडालाई सिंगापुर किन लग्यो ? र यो सम्झौता किन अड्कियो ? कानुनका जानकारहरुका अनुसार सिंगापुरको फैसलामा भारतमा सिधै लागु नहुन सक्छ । विवादमा रहेका दुबै पक्ष सहमति भए मात्रै सिंगापुरको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ अन्यथा हुन्न ।
अमेजन र रिलायन्स आमने सामने किन भए ?
सुत्रका अनुसार फ्युचर ग्रुप र रिलायन्स अब पहल गर्नुको साटो प्रतिक्षा गरिरहेका छन् की अमेजनले मुद्धा हालोस् । यसको सुनुवाई दिल्ली हाइकोर्टमा हुन सक्छ किन की फ्युचर र अमेजनको सम्झौतामा विवादहरु दिल्लीमा समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
अदालतमा त अमेजन र फ्युचर ग्रुप आमने सामने हुनेछन् तर रिलायन्स र अमेजन किन आमने सामने भए ? यो प्रश्न चोटिलो छ । यो प्रश्न फ्युचर ग्रुप या कुनै कम्पनीको सम्झौतासँगको मात्रै जोडिएको छैन् । बरु संसारको चमकदार बजार अर्थात बिग बजार देखिरहेका छन् । जसलाई हत्याउन यी प्रयासहरु जारी छन् ।
त्यो हो भारतको रिटेल कारोबार जुन १०९०० स्टोर्स र एक लाख ३० हजार करोडको बार्षिक कारोबार गर्ने रिलायन्स रिटेल अब देशको ठूलो रिटेल कम्पनी हो । र फ्युचर ग्रुपसँगको सम्झौताले उसलाई १७०० स्टोर र २० हजार करोडको बार्षिक आम्दानी हुनेछ । तर अमेजनको चिन्ता यो भन्दा बढी छ की उसले भारतमा साढे ६ अरब डलर भारतमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ जसका लागि सबै भन्दा ठूलो चुनौती रिलायन्सबाट देखिएको छ ।
किन की रिलायन्ससँग सबै भन्दा ठूलो रिटेल नेटवर्क मात्रै होइन, जियोमार्ट जस्तो अनलाइन पोर्टल पनि छ, जबकी अमेजनसँग केबल अनलाइन कारोबारको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । उता अनलाइन कारोबारमा अमेजनसँग फ्लिपकार्टले आदित्य बिर्ला फेसन रिटेलमा पनि सेयर किनेको छ ।
संसारको सबै भन्दा ठूलो अनलाइन रिटेलर अमेजन
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार सन २०३० पछि भारतमा अमेरिका र चीनपछि सबै भन्दा ठैलो रिटेल बजार विस्तार हुनेछ । यो वर्ष देशको रिटेल बजारको कारोबार आकार ७० हजार करोड डलर छ जुन १० सालमा बढेर १.३ लाख डलर हुने अनुमान छ । स्पष्ट छ की दुनियाँको सबै भन्दा ठुलो रिटेलर अमेजन यो बजारको ठुलो हिस्सा आफ्नो झोलीमा पार्न चाहान्छ ।
त्यसैले सन २०१९ को अगष्टमा अमेजनले फ्युचर ग्रुपको कम्पनी फ्युचर कुपन्स लिमिटेडको ४९ प्रतिशत सेयर किन्यो । यो कम्पनीले गिफ्ट भौचर, पेमेन्ट एपको कारोबार गर्छ । अर्थात कसैले बिग बजार र सेन्ट्रलको गिफ्ट भौचर किनेर कसैलाई दियो भने त्यो यहि कम्पनीबाट आउँनेछ । तर महत्वपूर्ण कुरा यो छ की त्यो कम्पनीमा फ्युचर रिटेल लिमिटेडको १० प्रतिशत सेयर थियो ।(बीबीसी हिन्दीबाट)
भारतमा सत्ता हल्लाउँदै किसान आन्दोलन, नेपालमा मल, बिउ नपाउँदा पनि चुपचाप
सरकार निजी क्षेत्रलाई ‘इम्पोज’ गरेर अघि बढ्दैनः अर्थमन्त्री
नेपालमा पनि फाइभ जी परीक्षणको तयारी, फोरजीकै शुल्कमा पाइने